भिडियो डाउनलोडर खोल्नुहोस्, इलेक्ट्रोनमा बनेको youtube-dl को लागि GUI | Ubunlog
भिडियो डाउनलोडर खोल्नुहोस्, इलेक्ट्रोनमा बनेको youtube-dl को लागि GUI
अर्को लेखमा हामी ओपन भिडियो डाउनलोडर वा youtube-dl-gui मा हेर्न जाँदैछौं। यो हो una youtube-dl को लागि क्रस-प्लेटफर्म GUI जसलाई Electron र Node.js बाट सिर्जना गरिएको हो। यस अनुप्रयोगको साथ हामी धेरै महत्त्वपूर्ण वेबसाइटहरूबाट, सबै प्रकारका ढाँचाहरूमा भिडियोहरू र प्लेलिस्टहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं।
यदि तपाईलाई अझै पनि थाहा छैन कि youtube-dl भनेको के हो भने, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि यो कमाण्ड लाइन डाउनलोड प्रबन्धक प्रोग्राम हो, जसको सहायताले हामी YouTube र कम्तीमा 1000 अन्य भिडियो होस्टिंग वेबसाइटहरूबाट अडियो र भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं। ओपन भिडियो डाउनलोडर एउटा खुला स्रोत अनुप्रयोग हो जसले ग्राफिकल इन्टरफेसबाट काम गर्न रुचाउने प्रयोगकर्ताहरूलाई youtube-dl को दक्षता ल्याउँछ।.
1 खुला भिडियो डाउनलोडर को सामान्य विशेषताहरु
2 डाउनलोड गर्नुहोस् र Ubuntu मा खुला भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गर्नुहोस्
2.1 कसरी प्रयोग गर्ने
खुला भिडियो डाउनलोडर को सामान्य विशेषताहरु
हामी यो प्रोग्राम फेला पार्न सक्छौं GNU / Linux, macOS र Windows को लागि उपलब्ध.
यो सफ्टवेयर हो नि: शुल्क र खुला स्रोत। यसको स्रोत कोड मा उपलब्ध छ GitHub.
यस कार्यक्रमको साथ हामी सबै उपलब्ध गुणहरूमा अडियो र भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई निजी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न, अडियो वा प्लेलिस्टहरू मात्र डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ।
कार्यक्रमले हामीलाई विकल्प दिनेछ अनुमानित डाउनलोड आकार देखाउनुहोस्.
डाउनलोड गति छिटो छ। यद्यपि यो मलाई लाग्छ कि इन्टरनेट जडानको गतिमा धेरै निर्भर हुनेछ।
यो अनुप्रयोगले हामीलाई भिडियो सूचीहरू डाउनलोड गर्ने सम्भावना दिन्छ, तर यसले डाउनलोड सूचीमा एउटा भिडियो मात्र देखाउन सक्छ। यदि प्लेलिस्टमा ५० भन्दा बढी भिडियोहरू छन् भने यो हुन सक्छ। प्रदर्शन कारणहरूका लागि, अनुप्रयोगले सबै भिडियोहरूलाई एकमा मर्ज गर्दछ।प्लेलिस्ट भिडियो'.
Nos यसले सिंक्रोनस रूपमा 32 सम्म भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ.
यो सफ्टवेयर हामीलाई भिडियो/संगीतसँग सम्बन्धित मेटाडेटा देखाउनेछ जुन हामी डाउनलोड गर्न चाहन्छौं।
यसले हामीलाईaप्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ गाढा वा अन्य प्रकाश विषयवस्तु.
सबै प्रकारबाट डाउनलोड गर्नुहोस् प्लेटफर्महरू: YouTube, vimeo, twitter र केहि अन्य.
भिडियोहरूको डाउनलोड समाप्त भएपछि, कार्यक्रमले हामीलाई तिनीहरूलाई पुन: उत्पादन गर्ने सम्भावना दिनेछ (यदि हामी खेलाडी कन्फिगर गर्छौं) वा फोल्डर खोल्नुहोस् जसमा हामीले यसलाई बचत गरेका छौं.
यी यस कार्यक्रमका केहि सुविधाहरू हुन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन् बाट ती सबैमा परामर्श लिनुहोस् परियोजनाको GitHub भण्डार.
डाउनलोड गर्नुहोस् र Ubuntu मा खुला भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गर्नुहोस्
सुरु गर्नु अघि, यो स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ ffmpeg हाम्रो प्रणालीमा, किनकि यो कार्यक्रम बिना डाउनलोड काम गर्दैन। यसलाई स्थापना गर्न, हामीले केवल टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) खोल्न र आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ:
स्थापना समाप्त गरेपछि, हामी अब youtube-dl-gui डाउनलोड गर्ने हेरचाह गर्न सक्छौं। यो कार्यक्रम Gnu / Linux प्रयोगकर्ताहरूको लागि AppImage को रूपमा उपलब्ध छ। फाइल वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ र जाँदै परियोजना रिलीज पृष्ठ। तपाइँ टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोलेर र यसमा आदेश कार्यान्वयन गरेर यो कार्यक्रमको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
जब डाउनलोड समाप्त हुन्छ, हामीले गर्नुपर्नेछ फाइल अनुमति दिनुहोस् यो अन्य आदेश लेख्दै:
यस बिन्दुमा, हामी गर्न सक्दछौं कार्यक्रम सुरु गर्न टर्मिनलमा निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्:
अघिल्लो आदेशमा थपिएका विकल्पहरूलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तिनीहरू बिना कार्यक्रमले हामीलाई ध्वनिसँग भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदैन, भले पनि यसले अडियो मात्र डाउनलोड गर्नेछ। हाम्रो कम्प्युटरमा ffmpeg बचत भएको बाटो संकेत गरिएको छ।
यो कार्यक्रम को उपयोग धेरै सरल छ, कन्फिगरेसन विकल्पहरूमा नजाइकन कार्यक्रमले सही रूपमा काम गर्नुपर्छ.
डाउनलोड र कार्यक्रम सुरु गरेपछि, हामी देख्नेछौं एक सरल इन्टरफेस.
हामीसँग मात्र हुनेछ हामीले डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियो वा अडियोको लिङ्क टाँस्नुहोस्, इन्टरफेसको शीर्षमा रहेको बक्समा.
त्यसो भए हामीले गर्नु पर्छ सबै आवश्यक मेटाडेटा सङ्कलन गर्न आवेदन प्रतीक्षा गर्नुहोस्.
जब अनुप्रयोगमा सबै आवश्यक डाटा उपलब्ध हुन्छ, हामी सक्छौं डाउनलोड विकल्प थिच्नुहोस्, र भिडियोहरू हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमा डाउनलोड हुनेछन्, जसलाई हामी कार्यक्रम विकल्पहरूमा चयन गर्न सक्छौं।
को रूप मा दर्शाए GitHub भण्डार, खोल्नुहोस् भिडियो डाउनलोडर र यसको रखरखावकर्ताहरू यस अनुप्रयोगको कुनै पनि दुरुपयोगको लागि जिम्मेवार छैनन्, AGPL-3.0 इजाजतपत्र मा उल्लेख गरिए अनुसार। यस परियोजनाको बारेमा थप जानकारीको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले गर्न सक्छन् भ्रमण गर्नुहोस् वेब पृष्ठ वा प्रोजेक्ट विकी.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » भिडियो डाउनलोडर खोल्नुहोस्, इलेक्ट्रोनमा बनेको youtube-dl को लागि GUI
GNOME ले Mutter र Phosh मा सुधार सहित धेरै नयाँ सुविधाहरू जारी गर्दछ
Meta ले वेबमा मानिसहरूलाई कसरी ट्र्याक गर्छ भनेर पत्ता लगाउन मोजिलाले मार्कअपसँग साझेदारी गर्यो